Ogaden News Agency (ONA) – Rabshado Khasaare Gaystay oo Nairobi Ka Dhacay.
Rabshado Khasaare Gaystay oo Nairobi Ka Dhacay.
Posted by ONA Admin	/ November 20, 2017
Sida ay kusoo waramayaan wakaaladaha wararka ugu yaraan afar qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya. Dadka deegaanka ah ayaa sheegay in koox ku hubeysan qoryo iyo baangado ay weerareen xaafado kala duwan, ayna ku dileen dadkan, hantina dheceen.
Booliska ayaa sheegay in ay baadhayaan dhacdadan iyo waxa sababay. Maydadka ayaa lagu tuuray meelo qashin qub ah. Mid ka mid ah meesha maydadka laga helay – Mathare – waa meesha ay ka dheceen rabashadihii ugu xumaa ka dib doorashadii lagu murmay ee bishii August, ee sanadkan.
Sabtidii lasoo dhaafay, sidoo kale rabshado ayaa ka dhacay Nairobi kuwaas oo u dhexeeyay booliska iyo taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga oo doonayay in ay hoggaamiyahooda soo dhoweeyaan. Raila oo diiday in uu ka qeybgalo doorashadii ku celiska ahayd ee October ayaa Kenya ka maqnaa 10 maalmood. Maanta ayaa la filayaa in mar kale ay maxkamaddu go’aan ka gaadho doorashada lagu celiyay oo weli sax ahaanteeda lagu muran san yahay.
Wararka ayaa sheegaya in ay isku dheceen booliska iyo dadka daggan xaafadaha isku-raranka ee dadka lagu dilay ee Nairobi. Afarta qof ee la dilay, oo seddax rag yihiin midna dumar tahay, waxaa ku yaalla nabaro loo maleynayo in ay sababeen baangad iyo middi. Dilkaasi ayaa sababay rabshado ku faafay xaafadaha qaar ee Nairobi, iyadoo booliska ay isku dayayaan in ay ka hortagaan dad cadheysan oo dibadbaxaya.
Taliyaha booliska Nairobi, Japheth Koome, oo xaqiijiyay dilka dadkaasi ayaa tilmaamay in ay billaabeen baadhitaan, balse wuxuu diiday eedaha sheegaya in dagaal qabiileed ka dhashay xiisadda siyaasadeed. Wuxuuna tilmaamay in dhacdadan ay tahay “shaqada dambiilayaasha budhcadda ah”.
Dilkan ayaa imaanaya maalin ka dib markii shan qof la dilay xilli ay garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi ku soo dhawaynayeen Raila Odinga, taas oo ay ka dhalatay rabsho khasaaro badan gaystay.